Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » दामनको रिसोर्टमा अचेत भेटिएका ८ जना भारतीय पर्यटकको मृ’त्यु
दामनको रिसोर्टमा अचेत भेटिएका ८ जना भारतीय पर्यटकको मृ’त्यु
७ माघ, काठमाडौं । मकवानपुरको पर्यटकीय क्षेत्र दामनको एक रिसोर्टमा बे’होस भएर काठमाडौं उपचारमा ल्याइएका आठ जना भारतीयको मृ त्यु भएको छ।
१५ जनाको समूहमा गएका उनीहरूले दुई कोठा रिजर्भ गरेका थिए। एक कोठामा आठ र अर्कोमा सात जना सुतेका थिए। अर्को कोठामा रहेका भारतीयलाई भने केही नभएको प्रहरीले जनाएको छ।
सोमबार थाहा नगरपालिका-४ सिमभञ्ज्याङस्थित होटल एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बसेका भारतीय पर्यटक मंगलबार बिहान अ चेत अवस्थामा भेटिएका थिए।
उनीहरूमध्ये पाँच जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको थियो।
‘उपचारमा ल्याइएकामध्ये पाँच जनाको मृ त्यु भइसकेको बुझिएको छ,’ अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले जनायो ।अन्य तीन जनालाई लिन पुन: हेलिकप्टर लिन गएको थियो। उनीहरूलाई अस्पताल ल्याउनसाथ मृ त घोषणा गरिएको थियो।
मृ त्यु हुने दुई जना महिला र दुई पुरूष र चार बालबालिका रहेका छन्। मृ तक सबैको पहिचान खुलिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू भारतको केरलाबाट आएका थिए।
मृ’त्यु हुनेमा ३८ वर्षीय रन्जित कुमार, ३४ की ईन्द्र कुमार, ३७ का प्रविणकृष्ण नायर, ३२ की सरिया नायर, ५ वर्षका अभी, ७ की अर्चना,५ वर्षका बैशनव र ९ की बन्द्रा छन्।
उनीहरू कोठामा ग्यास हिटर बालेर सुतेका थिए।उनीहरू निसास्सिएर बेहोस भएको प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ।अर्को कोठामा बस्नेले भने हिटर प्रयोग गरे/नगरेको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो।
हिटर प्रयोग गर्दा के के कुरामा सावधानी अपनाउने ?
दामनको एक रिसोर्टमा नाइट स्टेका लागि बसेका भारतीय पर्यटक मंगलबार बिहानै बे हो स अवस्थामा भेटिए । उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल त ल्याइयो । तर, चिकित्सकले बचाउन सकेनन् ।
बे’हो’स भएका ८ जनाकै मृत्यु भइसकेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डिएसपी उमेश लम्सालले बताएका छन् ।उनीहरुको कसरी बे’हो’स भए ? प्रहरीको अनुमान छ, हिटरको कारण । यद्यपि, मृ त्युको कारण भने पो’ष्ट’मा’र्ट’म रिपोर्टबाट मात्रै खुल्नेछ ।
अहिले नेपालस्थित भारतीय दूतावासको समन्वयमा पर्यटकको श व पोष्ट’मार्टम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसो त हिटर बाल्ने क्रममा असावधानी अपनाउँदा दुर्घटना भएको यो नै पहिलो घ’टना होइन । यस्ता थ्रुपै घ’टना सार्वजनिक भएका छन् ।जाडोसँग जुध्नका लागि हिटर बाल्नैपर्छ । चिसिँदै गएको वायुलाई सन्तुलित तापमानमा राख्ने कृतिम काइदा हो यो । खासगरी बुढाबुढी, रोगी, सुत्केरीका लागि यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले मानिसलाई चिसोबाट राहत त दिलाउँछ । तर, यसले स्वास्थ्य र स्किनमा पनि क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ । त्यसैले, तपाईँ हिटर वा ब्लोअरको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो परिवारको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
यसको गलत प्रयोगले ज्यानै जान सक्ने भएकाले निकै सावधानी पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ:-
– कहिल्यै पनि बन्द कोठामा हिटर अन गरेर ननिस्कनुहोस् । किनकी यसबाट वाहिरिने कार्वनमनोअक्साइड ग्यास मानिसको लागि निकै हानिकारक हुन्छ ।
– हिटर जलाएर पनि कहिल्यै निदाउनु हुँदैन । यसो गर्दा श्वासप्रश्वासमा बाधा उत्पन्न भएर ज्यानै जान सक्छ ।
– हिटरको नजिक छिटो जल्ने खालका कुनै पनि सामाग्री राख्नुहुँदैन । जहिले पनि कागज, ब्लाइंकेट, कपडा, दाउरालगायतका सामाग्री हिटरभन्दा टाढा राख्नुपर्छ ।
– हिटरलाई त्यस्तो ठाउँमा पनि राख्नुहुँदैन । जुन बाटोबाट बढी ओहोर दोहोर गरिरहनुपर्छ । अझ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय के हो भने हिटरलाई बच्चाले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । यसलाई कडा सतहको किनारमा राख्नुपर्छ ।